एप्पल स्प्रिङ इभेन्ट २०२१: के के सार्वजनिक भए ? – Bikash Khabar
एप्पल स्प्रिङ इभेन्ट २०२१: के के सार्वजनिक भए ?
बिहिबार, ०९ बैशाख २०७८ गते ९:१३ मा प्रकाशित	Author विकास खबर संवाददाता	Comment(0)	482 Views
आज यस्तो छ देशका ठुला नदिको बहाब अनुमान
काठमाडौं,११ असार । आज नारायणी, कर्णाली, महाकाली र यसका सहायक नदीमा बहाव सामान्य घटबढ हुने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ
झापा,१४ वैशाख । मेचीनगरमा इन्टरनेट र टेलिफोनको तार चोरी गरेको आरोपमा एक किशोरसहित दुई व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । मेचीनगर
अन्तराष्ट्रीय गैरसरकारी संस्था वान हार्ट वल्डवाइडको कार्यकारी निर्देशक सूर्य भट्टको जीवनयात्रा